ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နို့ဖိုးမြန်မာ ဒုက္ခသည်စခန်း မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား၊ နေအိမ် ၈၈ လုံး မီးလောင်က?? - Yangon Media Group
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နို့ဖိုးမြန်မာ ဒုက္ခသည်စခန်း မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား၊ နေအိမ် ၈၈ လုံး မီးလောင်က??
အုန်းဖန်၊ မတ် ၅
ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ် တာ့ခ်ခရိုင်အုန်းဖန်မြို့နယ် မဲ့ကျန်းစီရင်စုတွင် တည်ရှိသည့် ‘နို့ဖိုး’ မြန်မာဒုက္ခသည်စခန်းတွင် မတ် ၄ ရက် ညနေ၄ နာရီက မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အတွက် မတ် ၅ ရက်စစ်တမ်းများအရ အိမ်ခြေ ၈၈ လုံး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး လူဦး ရေ ၂ဝဝ ကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်နှင့်ဆက် စပ်လျက်ရှိသည့် ထိုင်းနိုင်ငံလေး ခရိုင်တွင် မြန်မာဒုက္ခသည်စခန်းများဖြစ်သည့် ဘန့်တုန်ရမ်း၊ ထမ်းဟင်၊ နို့ဖိုး၊ အုန်းဖန်၊ မယ်လ၊ မယ်လာမူ၊ မယ်လာဦး၊ ကရင်နီ (၁)နှင့် ကရင်နီ (၂) ဟူ၍ စခန်းကိုးခုရှိပြီး အဆိုပါစခန်းများ၌ ဒုက္ခသည် ပေါင်း ၉၇ဝဝဝ ခန့် နေထိုင်နေကြသည်။
”နို့ဖိုးမြန်မာဒုက္ခသည် စခန်းမှာ မြန်မာဒုက္ခသည် ၉ဝဝဝ ခန့် ရှိတယ်၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေက ၈ဝရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး မြန်မာက ၂ဝရာခိုင်နှုန်းနေထိုင်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့၃၅နှစ်လောက်ကစပြီး မြန်မာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ် လာခဲ့တာယနေ့အထိပဲ၊ မီးလောင် ရခြင်းအကြောင်းရင်းက လူကြီး တွေအလုပ်သွားနေကြတုန်း အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ကလေးတွေက ပြောင်း ဖူးဖုတ်စားရာက အိမ်ထရံကိုမီးကူး ပြီး လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့ သိရတယ်။ အခုလောလောဆယ်မှာ တော့ မီးဘေးသင့်ဒုက္ခသည်တွေကို စခန်းတာဝန်ခံတွေနဲ့ ထိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေက နေစရာစီစဉ်ပေးထားပြီး ဆန်၊ဆီနဲ့အဝတ်အထည် တွေ ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်။ မီး လောင်သွားတဲ့အိမ်တွေအတွက် အစားထိုးပြန်ဆောက်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေကစီစဉ်ပေးနေတယ်” ဟု မဲဆောက်အခြေစိုက် ထိုင်းချယ်နယ်(၃)မှ သတင်းထောက်ဖိချိုင်းက ပြောကြားသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းများ၌ နေထိုင်သူများသည် ဝါးများ၊ ဖက်များဖြင့် နေ အိမ်များ ဆောက်လုပ်နေထိုင် ကြရပြီး နေအိမ်များမှာလည်း ပြွတ်ကျပ်လျက်ရှိသဖြင့် မီးမလောင် ဖူးသည့်စခန်းဟူ၍ မရှိကြောင်း သိရသည်။
ပုံရိပ်မြှင့်တင်ရန် လာလီဂါပွဲများကို ပြည်ပတွင် ကစားသင့်ဟု ဘာကာ ဥက္ကဋ္ဌ ဆို